कोरोना महामारीले उत्पन्न गरेका आर्तनादहरु... :: Setopati
कोराना भाइरसको महामारी जति बढ्दै गएको छ, मानिसहरुका समस्याहरु झन् झन् जटिल बन्दै गएका छन्। झनै विकाराल अवस्था आउन सक्ने प्रबल सम्भावना छ, अहिलेको यो स्थिति हेर्दा। दिनानुदिन दिन आगो जस्तै सल्किरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको कुनैपनि संयन्त्रले काम नगरेको दुखद् अवस्था छ।
कोरोना जति जटिल बन्दै छ, नेपालको अर्थतन्त्र पनि धारासायी हुने लगभग निश्चित जस्तै भैसकेको छ। यसले आम नागरिकलाई सशंकित बनाएको छ। अहिले को यो अवस्था यस्तै रही रहने हो अनुमान गर्न सकिन्छ, भविष्यमा नेपालमा भोकमरीको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। आज (६) महिना जति भैसक्यो कोरोना महामारीको कारणले आम जनमानसमा समस्या फैलाएको।
जनता बेरोजगारी भैसकेका छन्। देशमा लकडाउन गर्दा यति ठूलो असर पारेको छ की त्यसलाई सजिलै आँकलन गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। रोजगारीका बाटाहरु बन्द हुँदै गएका छन् र कति त भै पनि सके। अब जनतालाई दैनिक गुजारा गर्ने समेत गाह्रो भैसक्यो। एक छाक खाने खर्च समेत नहुँदा बाटो बाटोमा मागेर खान पर्ने यस्तो कारुणीक स्थिति सिर्जना भएको छ।
सरकार कहाँ छ, अहिलेको यो समय नागरिकलाई थाहा छैन। सरकार भन्छ, कोही भोको रहनु पर्दैन तर यसको ठ्याक्कै उल्टो भैसक्यो। अब यहाँ सबै भोको रहने अवस्था आईसक्यो। सरकार भने अझै पनि शक्ति र सत्ताको खेलमा छ। कताबाट आफ्ना आसेपासेहरुलाई भरण पोषण गर्न सकिन्छ, त्यतै लागेको दुखद् अवस्था छ।
भगवान रुपी मनकारी
अहिले यस्तो लागेको छ, नेपालमा विभिन्न संघ संस्था र ठूलो मन भएका नेपाली हुने थिएनन् भने पक्कै पनि आज आम नागरिकहरु भोक भोकै मर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँदो रहेछ। सायद ती महान् व्यक्तित्वहरुको जति गुणगान गाएपनि कमै भएर आउँछ। आज गरिब दुखी हामी जस्ता भुइमान्छेको निमित्त भगवानको अवतारमा बनेर सेवा गर्दै हुनुहुन्छ।
भगवान खोज्न काँही जानु पर्दैन, दुखको बेला धेरै निमुखाहरुको भोक पेट भरिदिएर ज्यान बचाउनु भएको छ। तपाईहरु त साक्षत भगवानकै रुप हो। सेवा नै धर्म यो उदाहरण तपाईहरुबाट अनुशरण गर्ने सकिन्छ। तपाईहरु सबैलाई मेरो कोटी-कोटी प्रणाम छ। दुखको बेला सरकार निर्दयी साबित हुँदै गर्दा। उहाँहरु भगवान बन्नु भएको छ।
धेरै मनकारी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नाम लिन असमर्थ भएँ, माफ गर्नुहोला। नाम लिन मन थियो। धेरै हुनुहुन्छ महान व्यक्तित्वहरु, सबैलाई उच्च सम्मान हामी सबै निमुखा नेपाली जनताको तर्फबाट।
यस्ता संघसंस्था र व्यक्तित्वबाट हाम्रो सरकारमा रहेका शासकहरुले केही सिकुन्। भगवान सद्वुद्धि दिनुहोला यिनीहरुलाई।
विदेशमा नेपालीको पीडा
कोरोना महामारीले हामीलाई नेपालमा मात्र समस्या परेको कहाँ होर! नेपालभन्दा विदेशमा झन् दर्दनाक अवस्था र आर्तनादहरु छन् हामी नेपालीका। कोरोना महामारी विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको हो यसको जोखिमबाट अछुतो रहन खासै कुनै पनि देश सकेन। खासगरी रोजगारको सिलसिला रहेका नेपालीहरुलाई अत्याधिक समस्या पारेको छ।
धेरै नेपालीको रोजगारका लागि मुख्य गन्तव्य रहेका खाडी मुलुकमा कोरोना महामारीले गर्दा नेपालीका दुख कष्ट डरलाग्दो छ। विगत ६ महिलादेखि रोजगारी गुमाएर बसेका छन् त्यहाँ नेपालीहरु। कोरोना फैलिएर ती देशहरु पनि उच्च जोखिम परे। यही कारणले गर्दा लामो समयसम्म लकडाउन गरियो।
निरन्तर रुपमा कम् पनि चल्न सकेनन्। त्यसै कारण अधिकांश रोजगार दाताहरुले रोजगारी दिन नसक्ने स्थिति सिर्जना भयौ। त्यसैको शिकार हाम्रा दाजुभाइ पर्नु भएको छ। काम गर्नलाई काम छैन, ६ महिला भैसक्यो। काम नभएपछि खानालाई ज्यान धान्नको निम्ति पनि पैसा कति पनि छैन। घर आउ भने कोरोनाको कारण नेपाल सरकारले पनि उडान बन्द गर्दियो।
त्यही बसौँ भने खानालाई बस्नलाई समस्या भएको छ। ६ महिलासम्म कम्पनिबाट अलक हुँदा भिषा सकियो। त्यहाँ बसौँ भने अब 'इलिगल' भैयौँ। राजदूताबासमा गएर हारगुहार गरौं भने राजदुताबासले प्रवेशमा रोक लगादिएको र निर्दयी बनेको छ।
सरकारले बीच बीचमा उद्धार उडान भन्दै केही उडान सञ्चालन गरेपनि सरकारको कालो कर्तुत र अक्रमन्डियता छताछुल्ल भएको छ। उद्धार उडानको नाममा तिनै अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको ढाड सेक्ने काम मात्र गरेको छ। हवाइजहाज भाडामा तीन गुना वृद्धि गरेको पैसा छ। नागरिकबाट तीन गुना बढी पैसा लिएर केही उडान गर्यो। र अझ सरकारको व्यक्तव्य हामीले सरकारी तवरबाट उद्धार गरियो भन्दै डाटा देखाउँछ।
कतिसम्मको निर्लज्जताको प्रकाष्ट हो यो सरकारको! नागरिकको ढाड सेक्ने गरी पैसा लिएर केही उडान गरेपनि बीचमा फेरि बन्द गर्यो, कोरोना महामारी फैलिएको भन्दै। नागरिक आफै पैसा तिरेर आउँछु भन्दा उडान रोकिराखेको अवस्था छ। विदेश गएर देशको अर्थतन्त्र धानेका ती सोझासाझा नागरिकको सम्मान गर्ने नैतिक दायित्व सरकारको हैन र!
घर आउँछु भन्दा आउन नदिने, बेरोजगार भएर बसेका आफ्ना नागरिक तत्काल उद्धार गर्न सकेन। विभिन्न समस्या भए होला। कमसेकम त्यही देशमा आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन नसक्ने यो कस्तो सरकार, लाचार सरकार!
धैर्यको बाँध अब भत्किने वाला छ सरकार। छिटोभन्दा छिटो उचित किसिमको कदम चाहियो। दुखको बेलामा काम नलाग्ने सरकार आखिर के काम भन्ने आवेगले जनता उत्प्रोत भएका छन्। केही दिन अघि साउदी अरबमा नेपालीहरुले नेपाली राजदूत र नेपाल सरकार विरुद्ध घोर अपनाउन शैलीमा नारा बाजी गरेका छन्।
विदेशमा आफ्नो देशको सम्मान गर्नु साटो नागरिकले विरोध गरिरहेका छन्। यो पक्कै पनि सरकारको लागि राम्रो संकेत हैन। नेताहरुको गैरजिम्मेवारी पनले नागरिकहरु विदेशमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु साँच्चै यो सरकारको निम्ति खतराको घण्टी हो। के भोली चुनावको लागि तिनै जनाताको खुट्टा ढोग्न जानु पर्दैन! होसियार नेपाल सरकार! धैर्यताको बाँध टुटिसकेको छ। फेरि देशमा कतै विध्वंश नमच्चिएला भन्न सकिन्न।